နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဘဝမှာ မိမိကိုယ်ကို · MyWorld
နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဘဝမှာ မိမိကိုယ်ကို ကျဆုံးခြင်းဖြစ်လာစေတဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်
01 Oct 00:00 by Kyawt Mu Han
ပထမဆုံး ဒီ Topic လေးကိုရွေးချယ်ရေးသားရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဟာပုံမှန်အားဖြင့် လူတွေရဲ့အချိန်အများဆုံးကုန်ဆုံးတတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် သင်ဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်မပါဘူး၊ မပျော်ရွှင်တော့ဘူး၊ သင့်ကိုယ်သင်လမ်းပျောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရရင် သင့်ရဲ့ Personal Life မှာပါ အနည်းနဲ့အများ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလို Covid-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုရင် လူအများစုဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်နဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာ မိမိကိုယ်ကိုစိတ်တိုင်းမကျဘဲ စိတ်ဓာတ်ကျလာတာတွေ ကြုံနေရတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများကို James Clear ရဲ့3Stages of Failure in Work and Life ဆိုတဲ့အဆိုကနေ ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။
The Three Stages of Failure ကျဆုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်
Ref Imange : James Clear
1. Failure of Tactics - How
အလုပ်သေးသေးဖြစ်စေ၊ ကြီးကြီးဖြစ်စေ ပန်းတိုင်တစ်ခုထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ဆီရောက်အောင် ကိုယ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ကြိုးစားသင့်လဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ကိုယ်ဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ ဆိုတာမျိုးမသိချိန်မှာ ကျဆုံးပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာရအောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
2. Failure of Strategy - What
အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်။ အဲ့လိုအများကြီးထဲကမှ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နည်းလမ်းကမှားယွင်းနေမယ်ဆို အဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပဲ အောင်မြင်အောင် အစွဲကြီးပြီးကြိုးစားနေတာဟာ စိတ်ပင်ပန်း၊လူပင်ပန်းလာစေပါတယ်။ အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင် ကိုယ်ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရလဒ်ရအောင် နည်းမှန်လမ်းမှန်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
3. Failure of Vision - Why
နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့်ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာလဲ ဆိုတာကို ကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်တကယ်လိုချင်နေတာ ကိုယ်မသိရင် ကိုယ့်တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်က ဦးတည်ချက် မရှိဘဲ အချိန်ကြာလာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအလိုမကျတာတွေ၊ နေ့စဉ်အလုပ်ကို ငြီးငွေ့လာတာ၊ Motivation ကျလာတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစာစုလေးကိုဖတ်ပြီး အားလုံးမိမိရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာရော၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ သယဇာတဖြစ်အောင်၊ ဦးတည်ချက်တွေရှိနေအောင်၊ Motivation မကျအောင် မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လိုတိုင်းတာကြည့်ကြမလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်း လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။
Ref Link : https://medium.com/the-mission/the-3-stages-of-failure-in-life-and-work-and-how-to-fix-them-5d69196e0b38
လူငယ်တွေအနေနဲ့ System ကျတဲ့ ဘဝဖြစ်ဖို့ဆိုရင်
ဝန်ထမ်းဘဝမှာ အမြဲတိုးတက်ပြောင်းလဲနေဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲ?
7 days ago by Mike Htun
Customer Service ပိုင်းကို ကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ?
12 days ago by Kyaw Phyo Thike Moe
​Introvert တစ်ယောက်သည် Good Salesperson တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
21 days ago by Thet Hmu Khin
​အကျပ်အတည်းကာလမှာလည်း ကောင်းမွန်စိတ်ချရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ ဘာတွေထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်သလဲ?
28 days ago by Pan Zune Kyaw
​အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်နွံနစ်နေကြတယ်လို့ ခံစားနေရပြီလား
about 1 month ago by Phyo Thet Kyaw
about 1 month ago by Michelle Hsu